Jobho 21 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
21 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Imi, nyatsoteererai shoko rangu,Uye izvi ngazvikunyaradzei. 3 Ndishivirirei, ini nditaure;Mumwe nomumwe ozondinyomba hake pashure pokunge ndataura.+ 4 Ko ini ndiri kuudza munhu zvinondinetsa here?Kana kuti nei simba rangu roupenyu richishivirira? 5 Nditarirei, murambe makatarira muchishamiswa,Uye batai miromo+ yenyu. 6 Kana ndayeuka, ndinonetsekawo,Uye muviri wangu unobvunda. 7 Nei vakaipa vachiramba vachirarama,+Vachikwegura, uyewo vachipfuma kwazvo?+ 8 Vana vavo vanosimbiswa kwazvo vari pamwe chete navo vachivaona,Nevazukuru vavo vachivaona. 9 Dzimba dzavo dzinongova rugare chete, hadzina chinotyisa,+Uye havarohwi neshamhu yaMwari. 10 Nzombe yake inoberekesa, uye hairasi urume;Mhou yake inobereka+ uye haisvodzi. 11 Vanoramba vachibudisa vakomana vavo vaduku sezvinoitwa boka remakwai,Uye vanakomana vavo vanosvetuka-svetuka. 12 Vanoramba vachishevedzera vachiridza gandira norudimbwa,+Uye vanoramba vachifarira kurira kwomutopota. 13 Vanopedza mazuva avo vachifara,+Uye vanoburukira muSheori mushure menguva duku. 14 Vanoti kuna Mwari wechokwadi, ‘Ibvai kwatiri!+Hatifariri kuziva nzira dzenyu.+ 15 Wemasimbaose chii, kuti timushumire,+Zvinotibatsirei kana tikataura naye?’+ 16 Tarirai! Simba ravo harisi iro rakaita kuti vagarike.+Zano revakaipa rakaramba riri kure neni.+ 17 Rambi revakaipa rinodzimwa kangani,+Njodzi yavo inouya pavari kangani?Iye anovaunzira ruparadziko akatsamwa kangani?+ 18 Vanofanana here neshanga rinopeperetswa nemhepo,+Uye nehundi yatorwa nedutu? 19 Mwari achachengeta zvinhu zvinokuvadza zvomunhu nokuda kwevanakomana vake;+Achamupa mubayiro kuti azvizive.+ 20 Maziso ake achaona kupera kwake,Uye achanwa hasha dzoWemasimbaose.+ 21 Nokuti chii chaanozofarira mumba make iye asisipo,Mwedzi yake painenge yatapudzwa nepakati?+ 22 Angadzidzisa Mwari zivo here,+Zvaari Iye anotonga vakakwirira?+ 23 Munhu uyu achafa ava nezvakakwana,+Paanenge asinganetseki uye akagara zvakanaka; 24 Zvidya zvake pazvinenge zvazara nemafutaUye mwongo wemapfupa ake paunoramba wakanyorova. 25 Mumwe uyu achafa aine mweya unoshungurudzikaAsina kumboravira zvinhu zvakanaka.+ 26 Vacharara muguruva vari pamwe chete+Uye honye dzichavafukidza.+ 27 Tarirai! Ndinonyatsoziva pfungwa dzenyuNemazano amaizoda kushandisa kuti mundiitire chisimba.+ 28 Nokuti munoti, ‘Imba yomunhu anokudzwa iri kupi,Uye tende riri kupi, idzo tebhenekeri dzevakaipa?’+ 29 Hamuna kubvunza vaya vanofamba mumigwagwa here?Hamunyatsoongorori zviratidzo zvavo here? 30 Kuti pazuva renjodzi munhu akaipa anosiyiwa,+Uye kuti pazuva rokushatirwa kwazvo anonunurwa? 31 Ndiani achamuudza pachena nezvenzira yake?+Ndiani achamupa mubayiro wezvaakaita?+ 32 Iye achaendeswa kumakuva,+Uye murindi achaiswa paguva. 33 Achanakirwa nemavhinga evhu romumupata une rukova,+Achakweva vanhu vose kuti vamutevere,+Uye vaya vakamutangira vakanga vasingaverengeki. 34 Zvino imi munoedza kundinyaradza zvisina zvazvinobatsira sei,+Mhinduro dzenyu dzose hadzina kutendeka!”